Ukudluliselwa kwe-Ghost noma ukudluliselwa kogaxekile kuyimoto engafanele ebonisa i-akhawunti yakho ye-Google Analytics. Kodwa-ke, uma ubheka ukuthi i-hits ivela kuphi, uzobona ukuthi ivela kuwebhusayithi yokudlulisela phambili futhi ukwandise izinga lakho lokunciphisa kakhulu. Njengamanje, kunezinhlobo ezimbili eziyinhloko zokudluliswa kweghost ezithinta idatha ye-Google Analytics. Okokuqala, kukhona ama-spam bots kanye nabakwa-crawlers abakhombise amakhasi akho wewebhu bese benganaki amafayela e-robots.txt. Uhlobo lwesibili yiDarodar, okungaziwa njengenqubo engekho emthethweni yokukhiqiza imoto. U-Ryan Johnson, Semalt uMenenja weNtuthuko Yekhasimende, uchaza ukuthi inkinga enkulu ukuthi ukuxhunyelwa kogaxekile okuvela emoyeni kuvela ezizindeni eziningi, eziningi zazo ziyizihloko ezindala futhi zifakwe kumawebhusayithi ngehora.